Nzuzo nke nwanyi mara mma na ahụ ike
ị bụ ebe a: Home
Onwe-obi ike na omume!
Enwere m ike ịnweta obi ụtọ na ihe ịga nke ọma? Ndị mmadụ na-kewara abụọ edemede nke ndị mmadụ. The mbụ na udi na-agụnye ndị, onye bụ mgbe niile na-enwe obi ụtọ na ụtọ na ya onwe ya, aga nke ọma na ndụ onwe onye, na-arụ ọrụ. Ma na nke abụọ, Atiya bụ ndị, ndị na-elekọta ndị mbụ na udi ma na-achọ itinye na mbụ, Atiya. Ikweta, ọ bụla n'ime anyị anọwo na ugboro, mgbe anyị nwere ike na-enweta kwesịrị ukpono, ma ma n'ihi na nke obi umeala, ma anyị indulged a n'ihi egwu.
More: Onwe-obi ike na omume!
Onye ọ bụla na oge nke ike ọgwụgwụ mgbe niile nrọ nke mkpụrụ obi, nke, ka ìhè iyi jupụtara na mmiri ga-agba ọsọ site aru, saa na ọ bụghị naanị ike ọgwụgwụ, ma ihe niile na-ezighị ezi mmetụta uche na sensations nke ụbọchị. o, n'ezie, ndị kasị dị mfe mkpụrụ obi bụ ihe dị otú a "na-agwọ ọrịa" megide nrụgide, na ọ bụrụ na a na-abawanye na ike ọtụtụ ugboro? Mgbe ahụ ọ na-enyo agadi mkpụrụ obi, nke bụ ike na-enye ndị zuru okè ọnọdụ, ntatido, Ọ na-agwọ ahu na, lastly, Bibie ihe ike ọgwụgwụ.
More: n'ụba elu
ahụ na-elekọta ke ndaeyo
Summer ahụ doro abụọ ule: ultraviolet anyanwụ radieshon na elu okpomọkụ. Iji chebe megide radieshon, mkpa ka ị nlezianya tụlee oke nke na-echebe ụzọ, nakwa dị ka belata oge ndị na anyanwụ, ọzọ 1,5-2 awa ụbọchị.
Na-elekọta nke ahụ ke ndaeyo, ntị, ọ jụrụ. Ọ bụrụ na akpụkpọ na-amalite na-eto eto ntụ, wee tinye sikrob, ma ọ bụrụ na anụ bụ akọrọ, nalehayte mmiri. ahụ na-elekọta ke ndaeyo ga-saa mbara ma na-aga n'ihu.
More: ahụ na-elekọta ke ndaeyo
Skin Care Isi
The akpụkpọ kwesịrị ẹnamde anya, na ya ga-arụ ọrụ ike. Mgbe niile, ike ikpa-adabere ọ bụghị mgbe niile na, ihe ego ole ị na-akwụ ụgwọ maka ntecha, mma salons na ndị ọzọ na ụlọ ọrụ na-adịghị ọbụna ekwesị na-elekọta. Ruo n'ókè dị ukwuu ọ na-adabere na gị ike, si ebi ndụ, ị na-akwọ ụgbọala. Nke ahụ bụ ihe niile ị chọrọ ịma na, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka n'ụzọ zuru ezu-arụ ha akpụkpọ ahụ ike.
More: Skin Care Isi
Isi na-elekọta ngwaahịa
Onye ọ bụla n'ime anyị si akpa àgwà nyere a nta nke ya mara mma. Onye nwetara oké dara oké ọnụ ntutu, na onye – na nku anya ndị dị otú ahụ ogologo, na ọ dịghị ink na-adịghị mkpa ma ọ bụ mbọ si nwa ike ike. Ma, e nwere, onye ọdịdị gị anaghị amasị, ebe a, ha na-ekwu, bụghị ntutu, na òké ọdụ. Ma nke a na-adịghị mere. Ịma mma gị bụ elu, na n'ime uche, Ọ na-adabere na ị na.
More: Isi na-elekọta ngwaahịa
page 1 si 2
Ná ngwụsị nke
Ntecha maka elekọta ahụ